Fiber Termination Bhokisi
Fiber Optic Kuvharwa
Fiber Optic Zvikamu
Optical Fiber Zvikamu
Indoor / Kunze Fiber Cable
Iyo UK Ichavaka Yakakwana Optical Fibe ...
Iyo UK Ichavaka Yakakwana Optical Fiber Network Inoumbwa neMamirioni manomwe Nzvimbo Pakupera kwa2027 Zvinoenderana neshumo paTelecoms webhusaiti ...
Ministry of Telecom yeIndia: 5G Spectrum...
Ministry of Telecom yeIndia: 5G Spectrum Auction Inotarisirwa Kuitika Muna Chivabvu Iyo yakamirirwa kwenguva refu yekutengesa ye5G spectrum inotarisirwa kuitika ...
Chigadzirwa / Industrial Design
1 × 6 PLC Splitter Mini Metal Tube Type...
1×128 PLC Splitter LC APC ABS Bhokisi Op...
MPO-MT 12-core Multi-mode 10G OM3 Ribhoni ...
Nemakore gumi nemaviri eruzivo rweindasitiri, Shenzhen Optico Communication Co., Ltd inotungamira kugadzira fiber optic zvikamu uye inyanzvi inopa FTTH neFTTA mhinduro.
Zvinhu zvedu zvinosanganisira mitsara mitatu yekugadzira (miviri muShenzhen uye imwe muNinghai) uye imwe US-based research centre, uye mazana matatu evashandi vakanyatsodzidziswa, (kusanganisira vashandi vekugadzira, matekiniki, mainjiniya ekutengesa uye manejimendi), achitikweretesa kuwedzera kwezvigadzirwa zvinokwikwidza. uye tekinoroji yepamusoro
Kuvaka kukura kwedu kuburikidza nekudyidzana kwepedyo uye hukama hunogara kwenguva refu nevatengi vedu.
Yese imwe optic module inoedzwa muOptico test Center, 100% inoenderana nevose vatengesi pamusika.
Tarisa pakukura uye kuedza kuwana purofiti inochengetedza ramangwana redu.
Aya emhando yepamusoro manejimendi akachengetwa neInternational Organisation of Standardization (ISO), anopa akati wandei ebhizinesi maitiro anodiwa kuti aenderane kugadzira chigadzirwa uye kuendesa kuzadzisa zvinotarisirwa nevatengi.
Iyo FCC chiratidzo chetifiketi chinoshandiswa pazvigadzirwa zvemagetsi zvinogadzirwa kana kutengeswa muUnited States, izvo zvinosimbisa kuti kukanganiswa kwemagetsi kubva pachigadzirwa kuri pasi pemiganhu yakabvumidzwa neFederal Communications Commission.Zvigadzirwa zveOPTICO zvinonyatsoenderana neFCC, iyo ine chinangwa chekutonga radio wave uye magineti minda zvine musoro.
Iyo yekumaka yeEC inosungirwa kumaka kuEurope kune mamwe mapoka echigadzirwa kuratidza kuenderana nezvakakosha zvehutano uye kuchengetedza zvinodiwa zvakatemwa muEuropean Directives.Zvigadzirwa zveOPTICO zvinogadzirwa pasi pezvinodiwa neEC kuratidza kuenderana nehutano hwakakosha uye kuchengetedzeka.
CPR, inozivikanwawo seKuvaka Zvigadzirwa Regulation.Mutemo uyu unoti zvigadzirwa zvese zvinotengeswa kana kutengeswa muEurope zvinofanirwa kunge zvine mucherechedzo weEC, kana chiyero chakawiriraniswa chiripo chechigadzirwa ichi.Mucherechedzo weEC unoratidza kuti chigadzirwa chinoenderana nemutemo.Hazvirevi hazvo kuti chigadzirwa chichave chakakodzera kushandiswa kwese kwekupedzisira, asi zvinoratidza kuti chigadzirwa chinopindirana neDeclaration of Performance (DoP), sezvakaitwa nemugadziri.
© Copyright 20102019 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Mitemo yekushandisa uye Yakavanzika Policy
© Copyright - 2010-2019 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.Tags, Featured Products, Sitemap, Mobile Site
SFP Optical Transceiver, XFP Transceiver, 100G SFP Transceiver, 10G SFP Transceiver, 1.25G SFP Transceiver, MTP MPO, Zvese Zvigadzirwa